Madaxweynaha Dalka Brazil Bolsonaro doonayaa in la mamnuuco fikirka jinsiga ee dugsiyada | Apg29
carruurta dugsiga waa in laga badbaadiyaa fikirka jinsiga, ayuu qoray wargayska Madaxweynaha Brazil Yaa'iir Bolsonaro on Twitter.
Image: World maanta.
Ma aha wax adag in la fahmo sababta madaxweynaha Brazil Yaa'iir Bolsonaro, sida Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, mid ah dadka Masiixiyiinta aad loo jecel yahay.
carruurta dugsiga waa in laga badbaadiyaa fikirka jinsiga, Madaxweynaha Brazil, Yaa'iir Bolsonaro, ayaa sheegay in eegaya Twitter. Maamulkiisa soo gudbin doonaa biilka on arrinta.
"Si loo ilaaliyo carruurta dugsiga, waxaan weydiiyay wasaaradda waxbarashada si ay u diyaariyaan biil in la mamnuuco fikirka jinsiga ee dugsiyada hoose," ayuu ku qoray 3 September.
Tallaabadan ayaa ku jira line la tiradaasi Bolsonaro ahayd markii uu noqday madaxweynaha Brazil ..
"Waxaan heysanaa fursad gaar ah ka hor oo naga mid ah in ay dalka dib ugu dhisno ... Waxaan waa isku dad keliya, qoyska, ixtiraamka diimaha iyo aasaaskii ururka Yuhuudi-Christian our, la dagaalanka fikirka jinsiga badbaadiyo, loo ilaalin lahaa qiimaha our," ayuu yiri, sida uu sheegay The Guardian-ka.
Ma aha wax adag in la fahmo sababta madaxweynaha Brazil Yaa'iir Bolsonaro, sida Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo aad u caan ah oo ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah. Iyo sida ay dhigiisa American, isagu ma aha mid ah wareegyada LGBT iyo bidix ee xisbiga Libaraalka aad loo jecel yahay.
dugsiga ugu fiican aduunka ee
Sunday School waa dugsiga ugu wanaagsan ee carruurta! Ha tagaan dugsiga Sunday si ay u heli qabsaday, Ciise - ama halkii, in Ciise u hesho - ka dibna ay ku nabad iyo habboonaanta marayo nolosha.